Sary an’ohatra No Hitan’ny Shinoa Amin’ilay Lahatsarim-Pirodanan’ny Lampihazo Iray Miparitaka Be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2015 16:17 GMT
Naorina tamin'ny 2008, toerana manamarika ny tanànan'i Bijie, ilay teatra; tamin'ny fotoan'androny, nanodidina ny 90 tapitrisa RMB (eo amin'ny 14,5 tapitrisa dolara amerika) ny asa fanarenana azy. Ny halemen'ilay lampihazo dia nampahatsiahy ny maro ilay tranoben'ny sekoly “tofu-dreg” nidaraboka nandritra ilay horohorontany tao Sichuan tamin'ny 2008, nahafatesana mpianatra an'arivony maro. Ny fomba fiteny hoe “tofu-dreg”, izay ny “bits” sisa tavela tamin'ny dingana fanamboarana “tofu”, dia mazàna no ampisaina hanondroana ireo asa fanorenana tsizarizary/kitoatoa.
Ireo fanamarihana feno eso mandratra mikasika ny hoe mavesatra loatra ny nofinofy Shinoa dia manome topimaso amin'ny tsy hafalian'ny vahoaka Shinoa amin'ireo teny faneva politika poakaty ataon'ireo manampahefana. Nataon'ilay mpanao sariitatra, Biaotailajiao, ho anaty sary iray (jereo ery ambony indrindra) ilay fihetsehampo, miaraka amin'ny fanehoany sambo iray feno polisy milentika miadana any anaty ranomasina.
Na izany aza, nesorina tao anaty tranonkala ilay tantara ary nodiovina taoriana kelin'izay ireo fanehoankevitra miiba tao anaty media sosialy Shinoa. Boxun, tranonkala Shinoa mpanohitra any ampitan-dranomasina, dia nahavita nanangona betsaka tamin'ireo fanehoankevitra nalaza momba ilay tranga :